ISiqithi sabucala esikhethekileyo + isiQithi soMzalwana, e-El Nido - I-Airbnb
ISiqithi sabucala esikhethekileyo + isiQithi soMzalwana, e-El Nido
Isiqithi sinombuki zindwendwe onguAlfred Lee
UAlfred Lee ufumene umlinganiselo weenkwenkwezi eziyi-5 kwi-100% yeendwendwe zakutshanje.
Ukuphela kwesiqithi sabucala kunye nolwandle olugqwesileyo e-El Nido!
Ivunywe liSebe Lezokhenketho (ICHAPHAZA)!
Kuquka Iphakheji Engenazinkathazo:
+ Indawo Ekhethekileyo Nesiqithi Sabucala (Akukho abanye abakhenkethi)
+ Isidlo Sakusasa, Isidlo Sakusasa Nesidlo Sakusasa (Ukutya KwasePhilippines)
+ Amanzi okusela +
Ukucoca indlu yonke imihla
+ I-Snorkelingwagen & Kayak Rental
+ Ikofu/Ibhari Yeti
+ Isithuthi sesikhephe esivela eTeneguiban Village
+ Ukusetyenziswa Kwelayibrari kunye neeBhodi
+ Ukuphulula izihlunu elwandle
+ I-Van Pick-Up/Drop
+ Uhambo Losuku
Enkosi kwi-Philippine Airlines ngokusikhankanya njenge-Philippine Robinson Crusoe kwi-Philippine Airlines In-Flight Magazine :)
Apha kwi-Brother Island sixatyiswa kakhulu ngamava ethu abucala esiqithi. Azikho ezinye iindwendwe ngexesha lokuhlala kwakho, kwaye mhlawumbi yeyona ndlela ingcono yokubaleka kugqatso lweempuku.
Sinolwandle olukhulu olumhlophe olutshintsha imilo rhoqo ngexesha lonyaka. Indlu yezinyanya eyilwe nguLolo Fermin ngo-1991 inamagumbi okulala ayi-7, amagumbi okuhlambela adibeneyo ayi-2, izindlu zangasese ezongezelelweyo ezi-2 kunye neeshawari ezi-2 ezongezelelweyo. Ilungele ixesha elithile elisemgangathweni kunye nabahlobo bakho abasondeleyo kunye nosapho, kodwa sikwabamba iihoneymoons, imitshato kunye neyoga retreats esiqithini.
Kwakhona kuhle ukufumanisa lihlathi lethu eligciniweyo kunye nehlathi le-bamboo. Ngokunjalo yi-coral reef ejikeleze isiqithi sonke. Unokwenza i-snorkel okanye i-kayak ujikeleze isiqithi kwisiqingatha seyure. Ilungele abaqalayo kunye nabaphakathi be-snorkers kunye ne-kayakers.
Amagumbi ayi-7 esinawo alungele amaqela ukuya kwi-16 iindwendwe. Kwakhona singakwazi ukulungiselela amaqela amakhulu (o.k.t. amatheko omtshato). Ukuba uthanda ukubuza iqela elikhulu, nceda usithumelele umyalezo ngaphambi kwesandla. Ukuba awuqinisekanga ukuba iqela lakho lingaba likhulu kangakanani, nceda ucinge ngokubhukisha iindwendwe ezimbalwa kuqala. Singasoloko sitshintsha inani leendwendwe emva kwexesha, kodwa unokufuna ukukhusela imihla, ngakumbi ngexesha lonyaka eliphezulu.
4.84 · Izimvo eziyi-118
ISiqithi sikaMzalwana, esikwabizwa ngokuba yiDarocoton encinci, sisiqithi esikwiPhondo lase-El Nido ePalawan, kwiiPhilippines. Ime malunga neekhilomitha ezingama-400 kumzantsi-ntshona ukusuka eManila kwaye inokufikelelwa ngesikhululo seenqwelomoya i-El Nido.
ISiqithi soMzalwana esiNcinci, esibizwa ngokuba yiNalbot, sinokubonwa kumbono omangalisayo ukusuka kwi-Hilltop Banyan House yethu, apho eyona iankile inkulu ehlabathini yaziwa ngokuba yatshona, kumgama nje wemizuzu emi-5 ukuya kweli-10. Kwakhona kukho ulwandle oluncinci oluziimitha ezili-12 ububanzi apho unokuya kwi-snorkeling kwaye ube nepikiniki ngexesha lasemini.
Vis a vis kwisiqithi esikhulu sasePalawan kunye nakwiziqithi ezijikelezileyo sinokufumana iidolophana ezincinci ezifana neLigad, iTeneguiban neSan Fernando. Ezi ndawo zinokufikelelwa kwimizuzu emi-5 ukuya kwengama-30 ukusuka esiqithini, zilungele uhambo lwemini kunye neepikiniki. Uhambo lweentsuku luhlala iiyure ezi-6 kwaye zibiza i-P700 / umntu. Uhambo lwemini lubandakanya isidlo sepikiniki.
Umphathi wethu wobudlelwane neendwendwe kwaye uhlala ekhona kuyo nayiphi na imibuzo. Wamkelekile ukuba usondele ekhitshini kunye nabasebenzi besikhephe ngokunjalo. Sifihlwe ehlathini sikwanabo nabachweli abambalwa abasoloko besenza imisebenzi yezandla. Abasebenzi bethu baqeqeshelwe ukuhlala ngasemva kwesiqithi, ngoko akukho mfuneko yakukhathazeka malunga nobumfihlo bakho endlwini nakwicala lolwandle lwesiqithi.
Mna nosapho lwam singabamkeli besiqithi, kwaye ngokunokwenzeka siya kuba sesiqithini ngokunjalo. Ukuba unayo nayiphi na imibuzo, nceda ubuze uNida, ubudlelwane bethu neendwendwe kunye nomphathi wogcino lwendlu.
Umphathi wethu wobudlelwane neendwendwe kwaye uhlala ekhona kuyo nayiphi na imibuzo. Wamkelekile ukuba usondele ekhitshini kunye nabasebenzi besikhephe ngokunjalo. Sifihlwe ehlathi…